Buy SQ8 Spy Camera (22,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
SQ8 Spy Camera
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 269ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 150 (+ 1 )
ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ 
ဘယ်သူ ကြိုးစားပြီး မှတ်တမ်းတင်ချင်သလဲ?
မှတ်တမ်းတင် ကင်မရာ လေးကို Rocket Online Shopping တွင်
အားအပြည့်သွင်းထားပါက ၁နာရီခွဲ ရိုက်နိုင်သည်။
Power bank ဖြင့် တွဲပြီး အဆက်မပြတ် ရိုက်နိုင်သည်။
SD ကဒ်စိုက်ပါ။ (မှတ်ချက် – ကဒ် မထည့်ထားရင် အလုပ် မလုပ်ပါ)
On/Off Button လေးကို ဖိလိုက်ပါ။
အပြာရောင်လေး ပေါ်လာရင် Stand by mode ဖြစ်သွားပါပြီ။
အပြာရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် On/Off ကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ။
အပြာ သုံးချက် ဖလက်ရ်ှပြပြီး ပိတ်သွားပါမည်။
720 နဲ. video စရိုက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ရိုက်ပြီးပါက On/Off ကို တစ်ချက် ဖိပေးပါ။
Video ရိုက်ပြီး ပါပြီ။
အပြာရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် Mode ကို တစ်ချက် ဖိပေးပါ။
နီပြာရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် On/Off ကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ။
သုံးချက် ဖလက်ရ်ှပြပြီး ပိတ်သွားပါမည်။
1080 နဲ. video စရိုက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အပြာရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် Mode ကို နှစ်ချက် ဖိပေးပါ။
အနီရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် On/Off ကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးပါ။
အနီရောင် မှိတ်ပြီး ပြန်ပေါ်လာပါမယ်။
ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ရိုက်ပြီး ပါပြီ။
အပြာရောင်လေး ပေါ်နေစဉ် On/Off ကို နှစ်စက္ကန်. ဖိထားပါ။
ဖလက်ရ်ှပြပြီး အပြာ ပြန်ပေါ်လာပါမယ်။
On/Off ကို တစ်ချက် ဖိပေးပါ။
Night Mode စရိုက်နေပါပြီ။
Sq8 – 22000 kyats
Sq11 – 25000 kyats
Behringer UM-2 USB sound Card
Panasonic mini speaker
japan mini စက်ကလေး
အမည်: SQ8 Spy Camera